အိန္ဒိယက နိုင်ငံသားချည့်ပေးနေလျှင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့ နိုင်ငံအား စွန့်ခွာလာကြ၍ ၎င်းတို့တိုင်းပြည်တစ်ဝက် ဗြောင်တလင်းခါသွားလိမ့်မည်ဟု အိန္ဒိယပြည်နယ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပြောဆို။ နိုင်ငံ သားခံယူခွင့် နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကုဋေ ၁၃၀ အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်၍ ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့အတွက် မဟုတ်ဟုဆို – H2Oupdatenews
အိန္ဒိယက နိုင်ငံသားချည့်ပေးနေလျှင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့ နိုင်ငံအား စွန့်ခွာလာကြ၍ ၎င်းတို့တိုင်းပြည်တစ်ဝက် ဗြောင်တလင်းခါသွားလိမ့်မည်ဟု အိန္ဒိယပြည်နယ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပြောဆို။ နိုင်ငံ သားခံယူခွင့် နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကုဋေ ၁၃၀ အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်၍ ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့အတွက် မဟုတ်ဟုဆို
oungmarine11@outlook.com 11/02/2020	5 Comments
အကယ်၍ အိန္ဒိယကနိုင်ငံပေးရန်ကမ်းလှမ်းမည်ဆိုလျှင် ဘင်္ဂလားဒက်တို့က တိုင်းပြည်အား စွန့်ခွာလာကြ၍ ၎င်းတို့နိုင်ငံတစ်ဝက်မှာ ဗြောင်တလင်းခါသွားလိမ့်မည်ဟု အိန္ဒိယအင်ဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဂျီ ကစ်ရှန်ရက်ဒီက ပြောဆိုခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဝန်ကြီး၏ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ရစရာမရှိအောင် တုန့်ပြန်ချေပလိုက်သည်ဟု ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် Dhaka Tribune က ယမန် နေ့ရေးသားသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော မှတ်ချက်စကားကို လက်ရှိအိန္ဒိယပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အမစ်ရှား၏ လူယုံတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ အာဏာရ BJP ပါတီဝင် လက်ယာဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျီကစ်ရှန်ရက်ဒီက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လွန်ခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ထုတ် အိန္ဒိယမီဒီယာများရေးသားချက်အရ သိရှိရသည်။
ဂျီ ကစ်ရှန်ရက်ဒီ၏ ပြောဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ထင်မြင်ချက်မျှ မပေးလိုကြောင်း၊ ၎င်းအနေဖြင့် မည်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုသည်ကို မိမိမသိကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက် တာအေကေအဗ္ဗူမိုမန်က တနင်္လာနေ့၌ ပြောဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နေရာအများစုမှာ အိန္ဒိယ၏လူမှုညွှန်းကိန်းအားလုံးထက် ရှေ့သို့ ကောင်းကောင်းရောက်နေသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့က အိန္ဒိယသို့သွားလိုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ လက်တွေ့တွင် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီး အိန္ဒိယတို့ကသာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်သို့ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင် လာချင်နေကြကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီး၏ စကားသည် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအပေါ် အကျိုးရှိနိုင်ပါမည်လားဟု သတင်းထောက်၏ မေးခွန်းကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက တိုက်ရိုက်မဖြေဆိုပဲ ဝန်ကြီးရက်ဒီ၏ ပြောဆိုချက်ကိုသာ ထောက်ပြလျှက် “ အားလုံးမှာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဟာ အိန္ဒိယရဲ့ရှေ့မှာ ကောင်းကောင်းရောက်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ “ ဟု ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးနှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ ပြန်လှန်ပြောဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး၏ ထင်မြင်ချက်အတွက် Dhaka Tribune က အဆက်အသွယ် မရရှိပါ။
၂၀၁၉-ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၁၂-ရကျနေ့တှငျ အိန်ဒိယပါလီမနျက နိုငျငံသားခံယူခှငျ့ နောကျဆကျတှဲပွငျဆငျခကြျဥပဒေ CAA ကို အတညျပွုခဲ့သညျ။ အဆိုပါဥပဒအေရ ၂၀၁၄-ခုနှဈ ဒီဇငျဘာ ၃၁-ရကျနေ့မတိုငျမီ ပါကစ်စတနျ -ဘငျ်ဂလား ဒကျရျှနှငျ့ အာဖဂနျနစ်စတနျတို့မှ ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး ပွညျတှငျးနယျမွေ အစိတျအပိုငျး၌ အခွခေနြထေိုငျသူမြားအား နိုငျငံသားပွုခှငျ့ပေးထားသညျ။
ထို့သို့ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရှိနိုင်သူများမှာ ဟိန္ဒူ-ခရစ်ယာန်-ဆစ်ခ် -ဗုဒ္ဓဘာသာ-ဂျိန်းနှင့် ဇိုရိုအက်စတာ စသည့်ဖြင့် ဘာသာဝင် ၆-မျိုးတို့အတွက် ဖြစ်သာဖြစ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ပါဝင်ခြင်းမရှိချေ။ ထိုအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြို့ကြီးအချို့တို့တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြရာမှ အဓိကရုန်းများဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီး၊ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ အချေအတင် အငြင်းအခုန်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တေလင်္ဂဏပြည်နယ် ဘာသာရေးစုဝေးပွဲအခန်းအနားသို့တက်ရောက်လာသော အင်ဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဂျီ ကစ်ရှန်ရက်ဒီက အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအက်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက် CAA နှင့်ပတ်သက်၍ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံအား ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
CAA သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း အိုးအိမ်ထူထောင်နေထိုင်သူ ကုဋေ ၁၃၀ တို့၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိကြောင်း တေလင်္ဂဏပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ပြောဆိုချက်ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဂျီ ကစ်ရှန်ရက်ဒီက တုန့်ပြန်ချေပခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ CAA တွင် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်တို့အတွက်မဟုတ်၊ ပါကစ္စတန်တို့အတွက်လည်း မဟုတ်ပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကုဋေ ၁၃၀ တို့၏ အကျိူးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်နေပါလျှင်၊ ၎င်းဥပဒေဖော်ပြချက်ကို အတိအကျ ထောက်ပြစေလိုကြောင်း၊ အတိုက်အခံ နေရှင်နယ်ကွန်ဂရက်ပါတီသည် CAA ကို ဖျက်သိမ်းပြင်ဆင်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြလျှက်ရှိကြောင်း၊
ယခု CAA အားဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများအား တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ချည့်ပေးနေရလျှင် ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များ နိုင်ငံအတွင်း လှိမ့်ဝင်လာပြီး ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံတစ်ဝက်မှာ ဗြောင်တလင်းခါသွားလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအခါကျမှ နေရှင်နယ်ကွန်ဂရက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီး ရာဟူးလ်ဂန္ဒီကို အပြစ်တင်ရမည်လား၊ တေလင်္ဂဏပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က တာဝန်ယူမည်လား ဆိုသည်ကို မိမိသိလိုလှပါကြောင်း အင်ဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက စိန်ခေါ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
((( Dhaka Tribune., February 10th, 2020,” Dr Momen rubbishes Indian minister’s ridiculous comment on Bangladesh.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ )))
#နိုင်ငံသားခံယူခွင့်နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေ #အိန္ဒိယကနိုင်ငံသားပြုခွင့်ပေးနေလျှင်ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံတစ်ဝက်မှာဗြောင်တလင်းခါသွားလိမ့်မည်
5 Replies to “အိန္ဒိယက နိုင်ငံသားချည့်ပေးနေလျှင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့ နိုင်ငံအား စွန့်ခွာလာကြ၍ ၎င်းတို့တိုင်းပြည်တစ်ဝက် ဗြောင်တလင်းခါသွားလိမ့်မည်ဟု အိန္ဒိယပြည်နယ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ပြောဆို။ နိုင်ငံ သားခံယူခွင့် နောက်ဆက်တွဲပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကုဋေ ၁၃၀ အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်၍ ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့အတွက် မဟုတ်ဟုဆို”
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားဥပဒေဆိုသည်မှာ ၎င်းနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်း၊ သမိုင်းစဉ်လာတို့အပေါ် မူတည်ပါသဖြင့် နိုင်ငံတကာအလိုကျ ဘုံဇာဟိ လိုက်လျှောပြင်ဆင်ပေးရန် လုံး၀မရှိ၊ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်ပြုရန် ဖြစ်လည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း အိန္ဒိယက သက်သေပြလျှက်ရှိပါသည်။ ခေတ်မီမီ ကမ႓္ဘာကြည့် ကြည့်နိုင်ကြပါရန်။ #HtayOung, #OungMarine
16/03/2020 at 5:17 AM
17/03/2020 at 8:50 PM
don’t mind me asking what theme you’re using?
24/03/2020 at 9:29 AM
what theme you’re using? (and don’t mind
10/05/2020 at 12:23 PM
Previous Previous post: တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၄-နာရီအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြင့်သေဆုံးနှုန်း ၁၀၈ – ဦးအထိ မှတ်သားဖွယ် ဆက်လက်မြင့်တက်။ ပြည်နယ် ၂၀ နီးပါးရှိမြို့ကြီးပေါင်း ၈၀ ကျော်အား စောင့်ကြပ်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့။ ဝူဟန်အခြေအနေ သတင်းမှတ်တမ်းတင်ပြနေသူ ဥပဒေပညာရှင်-ဂျာနယ်လစ် ပျောက်ဆုံးနေ
Next Next post: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ပိုက်ဆွဲငါးဖမ်းလှေနစ်မြုတ်၊ မလေးရှားသို့ ထွက်ခွာလာသော လူကုန်ကူးခံရသူဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၁၅-ဦးထက်မနည်းသေဆုံး။ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တို့၏ ဥရောပအိပ်မက်နှင့် ဆိုးရွားလှသော ဥပါဒါန်